Xildhibaan Eritrea ku tilmaamay saaxiibka ugu weyn ee Soomaaliya | KEYDMEDIA ONLINE
Xildhibaan Eritrea ku tilmaamay saaxiibka ugu weyn ee Soomaaliya
Sakariye Xaaji Cabdi, oo doonayay inuu biyo qabow ku shubo, qadiyadda dhalinyarada maqan iyo cabashada waalidiinta Soomaaliyeed, ayaa difaacay sababta dalka Eritrea loogu qaaday askarta Soomaaliya.
MUQDISHO, Soomaaliya - Sakariye Xaaji Cabdi, oo ka mid ah Baarlamankii 10-aad ee waqtigiisu dhawaan dhamaaday oo ka hadlayay ciidanka loo qaaday Eritrea, kadibna laga dagaal galiyay waqooyiga Itoobiya, ayaa ku dooday in uusan jirin waddan ku yaalla geeska Africa, oo ka mudan Eritrea, in Soomaaliya uu ciidamo u tababaro.
Wuxuu Eritrea, ku tilmaamay saaxiibka ugu weyn ee ay leedahay Soomaaliya, isla markaana, wuxuu carrabka ku dhuftay in dalkaas uusan ku jirin go’doon siyaasadeed, isla-markaana saraakiil Eritrean ah ay hadda ku sugan yihiin dalka.
“Eritrea dal go’doon ah maaha, xiriirka aan leenahay waa mid ka xoog badan dowladaha geeska Africa oo dhan”. Ayuu yiri Sakariye, oo u muuqday inuu marin habaabinayo arrinka dhalinyarada maqan.
Wuxuu caddeeyay sida uu uga xun yahay cunaqabatenta saran Eritrea, taas oo loo saaray taakuleynta ay la garab taagan tahay Ururada xiriira la leh Al-qaacidda ee dhibaatada ku haya Soomaaliya iyo guud ah geeska Affrica.
Sakariye, wuxuu ka mid ahaa xubno ka tirsanaa Isbaheysigii dib u xoreynta Soomaaliya, oo markii danbe ku haray Casmara 2008, wuxuuna afkiisa ka qiray inuu xiriir fiican la leeyahay Dowladda Eritrea.
Xildhibaan Sakariye, wuxuu ka mid ahaa siyaasiyiin suuqa siyaasadda ku soo galay, waxa a yiraahdo “Nacaybka Itoobiya”, hayeeshee, marnaba kama uusan hadlin xirrirka indho la’aanta ah ee Farmaajo la sameystay Abiy Axmed, wuxuuna hormar u arkaa cilaaqaadka Nidaamka waqtigisu dhamaaday la leeyahay kalitaliska Eritrea ee Isaias Afwerki.
Sakariye xaaji Cabdi, wuxuu ka mid yahay shaqsiyaad ay Farmaajo iyo Fahad Yaasiin u xil saareen, soo aruurinta ciidamo ku heyb ah, oo qorshuhu ahaa in ay Farmaajo kursiga ku sii hayaan, wuxuuna ciidamdii ugu badnaa Saddexdii ee la soo dhaafay ka soo arruuriyay gobolada Sool, Sanaaag iyo Mudug, kuwaas oo lagu qoray ciidamada loo yaqaan Gorgor iyo Haramcad.